အသက် ၂၆ - စိတ်နည်းပြီးရှက်တတ်၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ADHD သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးတဦးတည်း, ငါ၏လက်ရှိ Streak အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် Bing ၏နည်းနည်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 10 ရက်ပေါင်း, ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါသည်စက်တင်ဘာလအတွင်း nofap ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ဤယခုအချိန်အထိကျနော့်ရဲ့ဒုတိယ Streak ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ (၂၁) ရက်၊ ရက် (၅၀) …စသည်ဖြင့်အစီရင်ခံစာရေးသားချင်သော်လည်း၊ သင့်လျော်သော“ အစီရင်ခံစာ” ရေးသားရန်ကျွန်ုပ်အချိန်ဘယ်လောက်မျှမရခဲ့ပါ။ ယခုအခါရက်ပေါင်း ၉၀ တွင်ကျွန်ုပ်အားစိတ်အားထက်သန်မှုရှိစေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ others အခြားသူများ၏အစီရင်ခံစာများကကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီပေးခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုပြန်လာလိုသည်ဟုခံစားမိပါသည်
ကျွန်မကအရမ်း Self-သတိထားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်။ ငါ 26 နှစ်အရွယ်မှာကတည်းကငါအင်တာနက်-connection ကိုအတူကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး PC ကိုရတယ်ပြန်သောအခါငါ, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က PMO စှဲလမျးသူ 13 လှည့်။ ငါ့အသက်ကို၏ဒီတော့နီးပါးတစ်ဝက်ငါ porn ကိုကြည့်ပေါ်မှာအချိန်ကိုဖြုန်းခဲ့သညျ။ ငါစူပါစှဲလမျးသူဖြစ်ခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 2-5 ကြိမ်, တနင်္ဂနွေကြောင်းနှစ်ဆ။ စက်တင်ဘာလသည်အထိကျွန်မ porn စုဆောင်းခြင်း 1.3 တီဘီန်းကျင်၏အရွယ်အစားရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့် Porn, ဘာမှအဘို့အပြင်ပ HDD ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အနည်းနည်းဘဏ္ဍာကို, အရာအားလုံးထက်ထက်တန်ဖိုးရှိပိုပြီးတူ၏။ အရာအားလုံးခွဲထားခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်, ငါသည်အချို့သောညစ်ညမ်းကြယ်အချို့အမျိုးအစားများ, ငါရောသမမွှေ mode မှာအချိန်အများဆုံးအသုံးပြုမယ်လို့သော HDD အပေါ်အရာအားလုံး featuring အနေနဲ့အစွန်းရောက်သီချင်းစာရင်းကိုတူသောငါစောင့်ကြည့်ဖို့လိုခဲ့သမျှအဘို့အဖွင့်စာရင်းများကို, စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုယခုငါစဉ်းစားကြောင်း, တက် fucked, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမယုံသောအရာငါ့အဘို့သန့်ရှင်းသောအရာဝတ်ထုကဲ့သို့ဖြစ်၏အသံ။
ငါ့ဘဝကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အသေးစိတ်ကိုမသွားဘဲငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘ ၀ ၏အနက်ဆုံးတွင်းနက်ကိုတော်တော်များများမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၅ အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်နည်းနည်းနဲ့ခြေထောက်ပေါ်ပြန်ရပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဘဝအပေါ်ရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုရတယ်၊ အလုပ်သစ်တစ်ခုရတယ်၊ မြို့သစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တယ်၊ လူသစ်စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းအသစ်တွေဖွဲ့ခဲ့တယ် (ငါ ppl အသစ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရုန်းကန်နေရပေမယ့်ငါစီမံနိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာကိုယ်အလေးချိန်တော်တော်များများဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်အားကစားခန်းမကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇွန်လမှာစတက်ခဲ့တယ်။ အစမှာအားကစားရုံမှာတစ်ပတ် ၃ ကြိမ် ၃.၅ လလောက်လေ့ကျင့်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ငါတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလုပ်နေတာအားလုံး၊ ၂၀၁၄ မှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ကျဆုံးခြင်းကနေပြန်ကောင်းလာတယ်။ ဒီတော့စက်တင်ဘာလမှာ nofap ကိုဘာလို့ငါစတင်ခဲ့တာလဲ။
ငါ့မှာအသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာ IRC-Mates ၂ ခုရှိတယ်။ ငါထိုအချိန်ကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်ကကလေးဆန်သော IRC လိုင်းများမှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကတည်းက။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် IRL နှစ်ခုလုံးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က nofap ကိုပြောခဲ့တာကဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့“ blabla စူပါပါဝါတွေ၊ ယောက်ျားတွေပါတကယ့်စစ်စစ်” လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့တခြားအိမ်ထောင်ဖက်က“ hahahahaha … .nop၊ ဒါကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး” လိုပြောခဲ့တယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ဒါကြောင့် ၂၀၁၅၊ စက်တင်ဘာလမှာငါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့တစ်လစာတစ်လ ၀ ယ်လိုက်တယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်၊ ညစ်ညမ်းသောနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု၊ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့၏အရာဝတ္ထုများကိုဤကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရန်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသည့်မှန်ကန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိလျှင် ဒါနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ငါညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေ၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားအိမ်ထောင်ဖက်အားသူသည်ကျွန်ုပ်၏ acc ကို သုံး၍ ညစ်ညမ်းမှုအချို့ကိုဖမ်းယူနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူ၏ပြန်ကြားချက်မှာ“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါခဏတာမှမရှိတာ” သူ့ကိုငါလိုပဲနဂါးငွေ့တန်းအဖြစ်အမြဲသိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော့်ကိုတကယ်သိချင်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကို nofap အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပြောပြီးဗီဒီယိုပြသည် အကြီးအညစ်ညမ်းစမ်းသပ်မှု (သင်၏သမျှယခုအားဖြင့်သိသင့် !!!) ။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ fapping ကအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကငါ့ကိုတကယ်ထိမိသောအချက်ပါပဲ အရာကတော့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးဘဝပြmyနာတွေရဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ကအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရောဂါဖြစ်နေတယ်။ ငါဆေးတွေမသောက်ရသေးဘူး (မကြာခင်မှာသူတို့ရတော့မယ်) ။ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့ဒီ 'nofap' ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို (ဆေးဝါးများမလိုအပ်ဘဲ) တစ်နည်းနည်းနဲ့ကူညီနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဟာလူမိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးကစမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏ fave porn အားလုံးပါ ၀ င်သည့် hard drive တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒါနဲ့ငါလုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုပြု၏။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငိုလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ YouTube ပေါ်မှညစ်ညမ်းသောစမ်းသပ်မှုဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်၏ irc-client သို့ alt-tabbing လုပ်ပြီးသည့်အခါကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအား“ ငါ၊ nofap ကိုစမ်းသုံးကြည့်မယ်။ ငါ့ရဲ့ porn အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ” ဆိုတာကိုငါဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ပြင်ပ drive ကိုသွားပြီး drive တစ်ခုလုံးကို format လုပ်တယ်။ ဒါကပြန်မရတဲ့အရာပဲ😉 (ငါ streaming porn ကိုမုန်းတယ်, ဒါကြောင့် hdd-porn ငါအစဉ်အဆက်အသုံးပြုခဲ့သည်သမျှ) ။
အမှုအရာလှိမ့စတင်စတင်ခဲ့သည်ရှိရာအိုကေဒါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲရဲ့ပထမရက်အနည်းငယ်မှာမင်းတို့အားလုံးသိတယ်။ ကောင်းပြီ, ငါ 10 ရက်အကြာမှာပြန်။ ငါ Streak အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးဒီမှာကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်တာကတော့ LIFE.IS.FUCKING.AWESOME ။ ငါပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်ကိုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အနည်းငယ်မျှဝေနိုင်ပေမယ့်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတိုက်ဖျက်ရေးအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ ထိုတိုက်တွန်းချက်များသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးတွင်မရပ်တန့်သွားပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်ကုသဖို့နှစ်အနည်းငယ်ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်တာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့အခါသင်ဟာလှည့်ထွက်သွားပြီးထွက်သွားလို့မရပါဘူး။ ဒီအလေ့အကျင့်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုမိုအချိန်ကြာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါပေးတဲ့အကြံဥာဏ်တွေကဒီအပိုင်းမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖတ်ခဲ့တဲ့တူညီတဲ့အရာများဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင့်မှာအမြဲတမ်းလုပ်စရာတစ်ခုခုရှိရမယ်၊ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကသင့်ရဲ့အပြင်းအထန်အပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်။ အားကစားရုံကဒီမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်ကြိမ်အကြံပြုခဲ့သည်။ nofap ကိုစပြီးတာနဲ့ငါအားကစားရုံပုံမှန်လုပ်တယ်။ ငါအားကစားရုံကိုတစ်ပတ်လျှင် ၅-၆ ကြိမ်ထိ (၄ ရက်ဆက်တိုက်၊ ၁ ရက်တာ၊ တစ်နေ့တာကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ခန္ဓာအပိုင်းများ၌အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်) အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ လတ်ဆတ်တဲ့အစာကိုချက်ပြုတ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအရာများကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုလုပ်, ပစ္စည်းပစ္စယမတတ်နိုင်သောကလေးငယ်မဟုတ်ဘဲ fuck ဆိုတဲ့လူဖြစ်, ။ ဒါ့အပြင်ငါ badass ဖြစ်ကြောင်းနာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်ပုံဖော်ဖို့ကြိုက်တယ်, ငါ fap မှအရှုံးမပေး၏အစွန်းအခါငါ "Xy ဒီအခြေအနေမှာဘာလုပ်မလဲ" စဉ်းစားရန်ကြိုးစားသည်။ ဥပမာ: fapping သည် Batman ၏ရန်သူဖြစ်လျှင် batman သည် fap ကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ အရှုံးသမားကိုအရှုံးပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ငါကဲ့သို့သောအရာများကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုလျှင်၊
ငါလည်းအောက်တိုဘာလမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ငါဒီမိန်းကလေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကသိခဲ့ပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမဟာကြီးမြတ်ပြီးကျွန်မတို့မှာတူညီတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအမှားကသူမကိုအောက်ခံခြေထောက်ပေါ်တင်ပြီးပြီဆိုတာပဲ။ သူမသည်ငါ့မျက်မှောက်၌စုံလင်ခြင်းရှိ၏။ ကျွန်မတို့ရဲ့ပထမဆုံး ၂ ရက်အကြာမှာသူမကိုတကယ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့တွေ့တိုင်းသူမမျက်လုံးများမှ လွဲ၍ သူမသည်မည်မျှစုံလင်သည်ကိုစဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ ငါဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာလူသစ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကတ်တွေအားလုံးကိုမှန်မှန်ကစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသူမကိုအောက်ခံခြေထောက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမသည်တကယ်အလုပ်များလွန်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယနှင့်တတိယရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖုန်းအများကြီးနဲ့စာပို့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ အပြန်အလှန်မတွေ့ရသည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက် nofap တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ထပ်မံတွေ့ဆုံတဲ့အခါငါကွဲပြားနေပြီဟုခံစားနေရပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် nofap မှရရှိသော 'reboot' ကိုခံစားမိနိုင်သည်။ ငါကအောက်ပါ nofap ကြောင့်ဖြစ်ရတာလားဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မတွေ့မချင်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် 2% သေချာမသိဘူး၊ ငါတို့တတိယရက်မှာတော့သူမကိုကွဲပြားတဲ့အလင်းရောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါသူမ၏ ... အများကြီး aura ခံစားခဲ့ရ? သူ့စိတ်ဓာတ်လား။ သူမရှိနေခြင်း ဒီဟာကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့သူမအပေါ်ဘာစိတ်ခံစားချက်မှမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာအလှဆုံးမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တာ၊ သူဟာငါနဲ့တူတဲ့သူမနည်းနည်းလေးသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမမှန်တယ်မဟုတ်တာကိုသတိထားမိလိုက်တာ၊ သူမလိုက်ဖမ်းတာဟာမိုက်မဲတဲ့အရာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရုံပဲ။ သူမ၏အပေါ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမတွေ့တော့ဘူး။ ကျနော်တို့စာပို့နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် TV Shows, Star Wars, Nintendo စတာတွေလိုမျိုးအရာတွေအကြောင်းပြောရုံသာမကကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စလည်းမပါ။
မကြာသေးမီက“ ငါကသာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်”၊ “ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်”၊ “ မိန်းကလေးများအားလုံးကငါ့ကိုကြည့်နေကြတယ်” ကဲ့သို့သောဤကဏ္redခွဲတွင်မရေမတွက်နိုင်သောမိုက်မဲသောအကြောင်းအရာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒါကဒီအကြောင်းဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်။ သေချာတာပေါ့ဒါဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်မဖြစ်သင့်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုကြည့်တာ၊ ဘာမှမကြည့်တာကိုသတိမပြုမိကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေအတွက်ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ငါဟာအရာရာတိုင်းကိုရှောင်ရှားပြီးငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာနောက်ကွယ်မှာပဲ MMOrpgs ထဲကိုဝင်ပြီးဘဝကနေပုန်းရှောင်ခဲ့တယ်။ ငါက ၁၈၀ ဒီဂရီလှန်ပြီ၊ အခုငါကတခြားသူတွေဆီချဉ်းကပ်၊ နေ့ကထွက်ပြီးဘ ၀ ကိုရှင်သန်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ ထိုအခါငါက nofap သင့်ကိုပေးနိုင်ပါသည်တစ်ခုခုပါပဲထင်ပါတယ်။ သငျသညျရုံလူ-တက်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်နေ့စဉ်ပစ္စည်းပစ္စယကိုမကြောက်ဘဲနေလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေ၌ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်လိမ့်မည်။
"အလုပ်လုပ်" ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့လျော့နည်း demotivated ။ ငါပစ္စည်းပစ္စယအမှုကိုပြုရ, ပြီးတော့နောက်မှကောင်းသောခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ခုခုစတင်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်လည်းငါ့အာရုံကိုလိုငွေပြမှုရောဂါနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ 100% သေချာမဖွစျ၏။
ပစ္စည်းပစ္စယသငျသညျ day1 ပြီးနောက်မှအကျိုး: သင်၏လက်ကိုအပေါ်မှာပိုပြီး TIME, PMO အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု FUCKIGN စွန့်ပစ် IS!
ငါသည်အခြားဘာပွောနိုငျသလဲ ငါသည်ငါ့လက်ရှိ Streak ၏ပထမဦးဆုံး 30days စဉ်အတွင်းဒီ subreddit တွေအများကြီး browse လေ့ရှိတယ်။ ငါတဦးတည်းကောင်လေးလက်ျာဘက်, relapsing အပေါင်းတို့သည်သူ၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြနှင့်မည်သို့ shitty သူအလွန်အခိုက်ခံစားပြီးနောက်ပို့စ်တင်သတိရပါ။ တ post ကိုအာဏာ alot ငါ့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါရမ္မက်ကိုတကယ်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ကြပြီးငါနီးပါးအတွက်ပေးအခါတိုင်းကျွန်မထို့နောက် relapsing ပြီးနောက်ကျရှုံးခြင်း၏ခံစားခကျြဖော်ပြသော post ကိုစဉ်းစားပါ။ ငါ့စိတ်ထဲ Shit နဲ့တူခံစား, ငါ့ကိုမြင်ယောင်နှင့်အထဲတွင်ပေးရမယ့်တကယ်ကိုမိုက်မဲအရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မယ်လို့ဖြစ်စေ, ငါ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ သင်တို့အဆိုပါအခိုက်အတိုကျတှနျးထားသ, သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားရပ်တန့်။ အစဉ်အမြဲ, မျက်မှောက်၌သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ!
ငါဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အလုပ်များနေအောင်လုပ်ပါ၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါစေ၊ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာအချိန်အများကြီးမဖြုန်းပါနှင့် (သင်၏အကန့်အသတ်များကိုသိပါ။ ) သငျသညျကို PC ပစ္စည်းများကိုလုပ်နေတာကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် PC ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်ခြင်းနှင့်ခဏကြာပြီးနောက်တွန်းအားကိုသတိပြုမိလျှင်, သင် haha ​​PC ပေါ်တွင်အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ကြပေမည်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းသုံးခု -
2: ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာပြီးလမ်းလျှောက်ယူ Get ။ များသောအားဖြင့်ကယ့်ကိုအစာရှောင်သင့်အိမ်၏အပြင်ဘက်များမှာတခါသွားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
3: သွားလာခြင်း။ အခြားလူများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထား, တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်း။
ဒီတော့ yeah, ငါသည်ဤငါ၏အ 90days သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းလူထ delete, ယောက်ျားတွေ up ပြုလုပ်စောင့်ရှောက်😉သတင်းပို့ဖြစ်ပါတယ်ခန့်မှန်း!
မဆိုသဒ္ဒါသို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်းအမှားတွေအတွက်ငါ့ကိုခွင့်မလွှတ်။ အင်္ဂလိပ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာစကားသည်မဟုတ်, ငါ haha ​​ဒီအက်ဆေးတခုတခုအပေါ်မှာခြုံငုံကောင်းသောအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။
LINK - ဤတွင်ငါ၏အ 90days အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ကြယ်ပွင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်🙂